Vaovao - Tongava ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina any Beijing
Raiso ny lalamby haingam-pandeha any Beijing Zhangjiakou hitsidika ny “tanàna vaovao misy ranomandry sy oram-panala” ny faritry ny fifaninanana Zhangjiakou dia hita ao amin'ny Distrikan'i Chongli, Tanànan'i Zhangjiakou, Faritanin'i Hebei. Ny tolakandron'ny 19, Ity no gara voalohany indrindra eto amin'izao tontolo izao izay mandeha mivantana amin'ny Lalao Olaimpika ..
Ny gara Taizicheng dia manana sehatra telo ary tsipika fahatongavana sy fiaingana efatra. Amin'izao fotoana izao, ny haavon'ny fandefasana isan'andro dia mety hahatratra olona mihoatra ny 4000. ny fananganana lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha any Beijing Zhangjiakou dia natomboka tamin'ny Desambra 2015 ary napetraka tamin'ny 30 Desambra 2019. Ny fisokafany sy ny asany dia nanamarika fandrosoana vaovao teo amin'ny fananganana ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina. Aorian'ny fisokafan'ny lalamby haingam-pandeha any Beijing Zhangjiakou, ny toerana lehibe amin'ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina manomboka any Beijing ka hatrany amin'ny tanànan'ny Prince dia ho afaka ao anatin'ny adiny iray.
"Peratra gilasy ranomandry" sy "snow Ruyi"
Ny faritry ny fifaninanana Zhangjiakou dia fantatra amin'ny anarana hoe "faritra fanaovana ski voajanahary indrindra indrindra any Shina Avaratra". Tonga tao amin'ny foibe mitsambikina nasionaly avy eo ny sekretera jeneraly Xi Jinping. Ity no toerana misy ny fifaninanana miaraka amin'ny habetsaky ny fananganana lehibe indrindra ary ny fahasarotana ara-teknika avo indrindra ao amin'ny faritra fifaninanana Zhangjiakou. Mandritra ny fifaninanana dia handray ny fifaninanana rehetra amin'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko sy hetsika Nordic izy io, ary hamokatra medaly volamena 8.
Miorina eo anelanelan'ireo lohasaha no misy ny foibe fitsangatsanganana an-tanety. Ny famolavolana maritrano lehibe dia avy amin'ny firavaka nentin-drazana sinoa "Ruyi", antsoina hoe "xueruyi". Làlana roa no naorina tao amin'ny foibe fitsangantsanganana an-tsena nasionaly, izay nandany ny fanekena ny International Snow Federation tamin'ny Novambra 2020, nivadika ho "snow Ruyi" nipetraka teo an-tendrombohitra
"Xueruyi" dia mampiasa rindrina ambainy fitaratra miolaka, izay ahafahanao tsy mijery ny lalan'ny ski. Tao amin'ny foibe fitsangatsanganana ski nasionaly, Xi Jinping dia nitsidika ny fiaraha-miory amin'ireo atleta, mpanazatra sns. Nanazava tamin'ny sekretera jeneraly i Xu Gaohang, mpitarika ny ekipa fanazaran-tena amin'ny lalao ski jump, tamin'io andro io ihany. Nilaza tamin'ny "maso vaovao momba ny raharaham-pirenena" izy fa ny toe-javatra valan'aretina dia nampihena ny fahafahan'ny fifaninanana ary "mahay manao fahaiza-manao anaty ao ambadiky ny varavarana mihidy" ihany. Hatramin'ny faran'ny taona lasa, ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia nifantoka tamin'ny fiofan-drivotra rivotra, ary afaka mahatsapa ny fiorenan'ny zoro mikoriana telo samihafa, izay misoroka ny olana amin'ny fotoana fohy loatra amin'ny fotoana sy ny toerana fampiofanana amin'ny sehatra, ary manatsara be ny fiatraikany fiofanana .
Fiofanana mitsambikina ski Ao Zhangjiakou, ivon-toerana fanaovana ski an-tsehatra nasionaly, ivon-toerana fanaovana ski iraisam-pirenena ary ivon-toerana biathlon nasionaly no namorona ny vondrona kianja poplar taloha. Vondron-kianjan'ny Olaimpika ririnina vaovao tanteraka izy ity. Ny toerana dia ampifandraisan'ny lampihazo mandeha antsasaky ny boribory "peratra gilasy" misy haavony manodidina ny 8 metatra. Ny afovoan-tany biathlon no kianja filalaovana olympika farany notsidihin'ny sekretera jeneraly tamin'io andro io.